Rev. Huai Suan Dim – Full Gospel Assembly
Rev. Huai Suan Dim
ဆရာမဝဲဆွမ်းဒိန်(Dimte)ကို အဘဒုအရာခံဗိုလ်ဦးထန်ရှင်းငင်(လိုင်ဘုံ၊တီးတိန်)၊နှင့် အမိဒေါ်ညောင်လွန်းကျင်(လိုင်ဘုံ၊တီးတိန်)တို့မှခ.လ.ရ(၈၈)မင်းဘူးမြို့မကွေးတိုင်းတွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးမောင်နှမ(၅)ယောက်တွင်ဒုတိယမြောက်သမီးဖြစ်ပါသည်။မောင်နှမများမှာ အစ်ကိုဦးထောင်ခန့်ခိုင်(Math)၊ မအွပ်ရှမ်းလွန်(B.A – Psy)၊ မငင့်ခန်လွမ်(L.L.B)၊ ကျင်လမ်းဟွဲ(B.E)တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
၁၉၈၆-၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင်မင်းဘူးမြို့တပ်တွင်းမူလတန်းကျောင်း၌(သူငယ်ကိုတန်း မှ စတုတ္ထတန်းအထိ)ကို၎င်း၊ ၁၉၉၃-၁၉၉၄ခုနှစ်တွင်(ပဉ္စမတန်းနှင့်ဆဌမတန်း) ကိုအ.ထ.က မင်းဘူးမြို့၌၎င်း၊ ၁၉၉၄-၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် (ဆဌမတန်းမှအဌမတန်းထိ)ကိုအ.ထ.က(၃)ရေနံချောင်းမြို့တွင်၎င်း၁၉၉၇-၂၀၀၀
ခုနှစ်တွင်အ.ထ.က (၁)မဂ်လာဒုံမြို့၌၎င်း(နဝမတန်းနှင့် တက္ကသိုလ် ဝင်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၀၁ခုနှစ် ဧပြီလ မှ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ထိ အဝေးသင်တက္ကသိုလ် (ဒဂုံ)၌ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး B.A (Hist) ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၄ ဇွန်လမှ ၂၀၀၅ ဖေဖော်ဝါရီလ ထိ Full Gospel Bible Training Centre အပတ်စဉ်(၉) တွင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး Diplo-ma ကို၎င်း၊၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ တွင် International School of Mission ကျောင်း၌ Diploma ကို၎င်းရရှိခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၈-၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ပေါင်မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်း(၇ မိုင်)တွင် နေ့ဘက်ကျောင်းတက်ပြီးညပိုင်းအလုပ်ဆင်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၉-၂၀၀၀ တွင်ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ခန်းစက်(ကျောက်မြောင်း)တွင်အလုပ်လုပ်ရင်း တက္ကသိုလ် စာမေးပွဲဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။၂၀၀၀ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂) ရက်မှ မှ၂၀၀၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ထိ Korea Crocodine (လှိုင်သာယာ) အထည်ချုပ်တွင်၎င်း၊ ၂၀၀၁ခုနှစ် မေလ (၂၃) ရက်မှ မှ၂၀၀၄ ခုနှစ် မတ်လ ထိ Japan Crocodine(ရွှေပြည်သာ)တွင်၎င်းအလုပ်လုပ်ရင်းအဝေးသင်တက္ကသိုလ် ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၇ ခုနှစ် မေလ (၁၅) ရက်မှ တွင်ဖခင်ခေါ်တော်မူခြင်းခံရပြီး ၁၉၉၇ခုနှစ် မေလ(၁၅) ရက် တွင်ရန်ကုန်မြို့၌ အခြေချနေထိုင်ခဲ့သည်။ ဆရာမဝဲဆွမ်းဒိန်သည် မွေးမိခင်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုသိရှိပြီးဘုရားဝတ်၌မွေ့လျော်ခြင်း၎င်း၊ဆရာမခိုင်ဇနဲန်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရပြီး Rev.Dr. Dam Suan Mung မှ ရေနှစ်ခြင်းမဂ်လာကို ၂၀၀၃ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၃၀) ရက်မှ တွင်၎င်း၊ ဝိညာဉ် နှစ်ခြင်းကို ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဧပြီလ Youth Camp တွင်ရရှိခဲ့ပါ
၂၀၀၄ တွင် တက္ကသိုလ် နောက်ဆုံးနှစ်ဖြေဆိုချိန်တွင်း စာမေးပွဲအောင်မြင်ပါက ကျမ်းစာကျောင်းတက်ပါမည်ဟုဘုရားသခင်ထံ ဆပ်ကပ်ဆုတောင်း
ခဲ့သည့်အတိုင်း ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၃) ရက်မှ မှ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ထိ FGBTC ကျမ်းစာကျောင်းတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းပြီးသည့်အခါ ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းကာ တိကျသော ဆုတောင်းအဖြေကို(၃)ကြိမ်တိုင်တိုင်ရပြီးမှ အမှုတော်မြတ်တွင်ပါဝင်ဆပ်ကပ်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၃) ရက်တွင် FGA အသင်းတော်၌ အစမ်းခန့်အမှုတော်ဆောင်အဖြစ်၎င်း၊ ၁၁.၂.၂၀၀၇တွင် အချိန်ပြည့်အမှု့တော်ဆောင်အဖြစ်၎င်း ၊၁၀.၃.၂၀၁၃ တွင် လိုင်စင်ရအမှု့တော်ဆောင်အဖြစ်၎င်း၊ ၉.၉.၂၀၁၇ တွင်သိက်ခါတော်ရအမှု့တော်ဆောင်အဖြစ်၎င်းဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးချီးမြှောက်ခဲ့ပါသည်။
အသင်းတော်၏ဧဝံဂေလိနယ်မြေဖြစ်သော ဒလ မြို့သမတကမ်းခြေဧဝံဂေလိနယ်မြေတွင်တာဝန်ခံအဖြစ် ၂၀၀၇ ဇွန်လ မှစ၍ယခုချိန်ထိဆပ်ကပ်လျှက်ရှိပြီး၊ဧဝံဂေလိကဏ္ဍစာရင်းကိုင်(ငွေ)(၂၀၁၃ ဇွန်လ – ၂၀၁၅ ဇွန်လ ၃၀)အဖြစ်၎င်း၊အသင်းသားစာရင်း၊ရေနှစ်ခြင်းစာရင်း၊ မဂ်လာဆောင်စာရင်း၊က
လေးဆက်ကပ်စာရင်းတို့ကိုလည်းယခုချိန်ထိအမှု့ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။ ၂၀၀၆ တွင် ယုဇနဥယျာဉ် မြို့တော်နှင့်စစ်တောင်း(ချင်း)၌ တွဲဖက်အဖြစ်၎င်း၊၂၀၀၆-၂၀၀၉ တွင် မဂ်လာဒုံ၊ ထောက်ကြံ့၊ မှော်ဘီ၊ လှော်ကား၊ လှည်းကူး၊ တ-ဒဂုံ ၆၅၊ ၂၁၊ ၂၂ ကိုတာဝန်ခံအဖြစ်၎င်း၊ ၂၀၀၉မေလ – ၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီ ၂၉ တွင် သုဝဏ္ဍ၊သဃ်န်းကျွန်းနယ်မြေကိုတွဲဖက်တာဝန်ခံအဖြစ်၎င်းပါဝင်ဆပ်ကပ်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလ(၃၀)တွင်မန်းရရွှေသိန်းနှင့်ဂါ့တူးလေးတို့၏သားဖြစ်သူစစိုင်းတင်သိန်းနှင့်အိမ်ထောင်ကျကာသမီး (၂)ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ သမီးများမှာ မကျင်ရှမ်းဇွန်၊ မခိုင်သိန်းရှမ်းတို့ဖြစ်ကြပြီး အမှတိ(၄၆၉)၊ စံပြ(၅)လမ်း ၊စံပြရပ်ကွက်၊ သမတကမ်းခြေ၊ ဒလမြို့တွင်နေထိုင်လျှက်ရှိပါသည်။
စွဲကိုင်သောကျမ်းပိုဒ်မှာ ဇာခရိ ၄:၆
စွဲကိုင်သောဆောင်ပုဒ်မှာ အဆိုးအားဖြင့် အရှုံးမခံဘဲအကောင်းအားဖြင့် အဆိုးကိုနိုင်လော့။